people Nepal » मधुमेहले कसरी आँखामा हान्छ? मधुमेहले कसरी आँखामा हान्छ? – people Nepal
मधुमेहले कसरी आँखामा हान्छ?
Posted on December 20, 2017 by Purna Nanda Joshi
काठमाडौँः मधुमेहले दृष्टि समेत गुम्छ भन्ने त्यस रोगबाट ग्रसित धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।
प्रायः मधूमेहका बिरामीले मलाई केही भएको छैन भनेर सोचेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरु अरु अंगको जाँच गर्न जाँगर चलाउँदैनन्। तर, चिकित्सक भन्छन्, मधूमेह भएकाहरुमा सबैभन्दा धेरै दृष्टि गुम्ने खतरा हुन्छ।